Wed, Sep 30, 2020 | 01:15:20 NST
प्रश्न : मैले सुने अनुसार मलेसियामा नयाँ कामदार लैजान रोकिएको छ । के यो साँचो हो ? उत्तर : तपाईंले सुनेको कुरा साँचो हो । मलेसियाका उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीले नै नेपाली सहितका प्रवासी कामदार नलिने घोषणा नै गर्नुभएको छ । तर यो कति समयका लागि हो भन्ने कुरा तोकिएको छैन् । त्यसबारेमा हाम्रो संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि यसबारेमा मलेसियासँग औपचारिक धारणा बुझेको थियो । त्यसपछि मलेसियामा रहेको अवैधानिक कामदार व्यवस्थापन पछि विदेशी कामदार लिने भन्ने कुरा आएको छ । तर कहिलेदेखि लिने...
प्रश्न : मैले सिभिल इन्जिनियरीङ पढेको छु । म संग कामको अनुभव भने छैन । मलाई रोजगारीका लागि खाडीको कुनै देश जान मन छ । म जस्ता मानीसको तलब कती सम्म हुन्छ ? उत्तर : बलबहादुर तामाङ, पुर्व अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगर व्यवसायी संघ – तपाईं जस्ता मानीसको खाडी मुलुकमा बेसिक तलब ७५ हजार नेपाली रुपैया बराबर हुन्छ । कामको अनुभव पनि भए झनै राम्रो हुन्छ, राम्रो तलब सुबिधा पाउनु हुनेछ । खाडी मुलुकबाट उच्च दक्ष कामदारको धेरै माग आइराको हुन्छ । तलब सुबिधा पनि २ लाख नेपाली रुपैया बराबर ह...
प्रश्न : म विदेश जाने तयारी गर्दै छु । विदेश जाँदा के के कुरामा सचेत भइयो भने विदेश गएर दुःख पाउनु पर्दैन ? नेपालमा के के प्रक्रिया पुर्याइयो भने दलालबाट ठगिनबाट बच्न सकिन्छ ? उत्तर : ज्ञान प्रसाद गैरे, वैदेशिक रोजगार व्यवसायि, सकभर विचौलियाहरुको पछि नलागी भरपर्दो वैदेशिक रोजगार कम्पनीबाट जाने हो भन्नेकुरा प्रश्ट हुनुपर्यो । विदेश जाँदाखेरी कुन कम्पनीमा जाने हो, काम के हो, तलब सुबिधा कस्तो छ थाहा पाएर जानु होला । हरेक रोजगारदाता कम्पनीले म्यानपावर कम्पनीलाई डिमान्ड बुक पठाएको हुन्छ । त्यसमा कम...
प्रश्न : रोजगारीका लागि विदेश जाँदा सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागु गरे पनि म्यानपावरमा गएर बुझ्दा यस्तो भिसामा जाँदा राम्रो हुँदैन भन्छन । गयो भने कम्पनी टुट्छ वा कमाइ नै हुँदैन भन्छन् । गए विजोक मात्रै हुन्छ रे । पैसा धेरै तिरेर जाँदा काम र कमाई राम्रो हुन्छ भन्छन्, यो कुरा साँचो हो ? उत्तर : राज जी, यो कुरा साँचो होइन । तपाईंलाई जस्तै अरुलाई पनि थोरै पैसा तिरेर जाँदा थोरै कमाई र नराम्रो काममा परिन्छ भनेर दलालले भन्ने गरेका छन् । धेरै पैसा तिर्दा राम्रो काम र कमाई हुन्छ भनेर लोभ देखाउ...
प्रश्न : मेरो पासपोर्ट म्यानपावरमा छ । भिसा आएको छैन् । म्यानपावरमा सोध्दा आइहाल्छ भन्छ र पासपोर्ट माग्दा दिँदैन । त्यसका लागि कहाँ उजुरी गर्ने होला ? उत्तर : बेनामे साथी, कानुन अनुसार तपाईंको पासपोर्ट कुनै संस्था वा व्यक्तिले तीन महिना भन्दा धेरै समय राख्न पाउँदैन वा ‘होल्ड’ गरेर राख्न पाउँदैन् । म्यानपावर कम्पनीले तीन महिना भन्दा धेरै समय देखि तपाईंको पासपोर्ट राखेको हो भने त्यो गैरकानूनी काम हो । त्यसका लागि तपाईंले वैदेशिक रोजगार विभागमा गएर उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । विभ...
प्रश्न : म सुपरमार्केटमा काम गर्न कतार जाने तयारी गरिरहेको छु । नेपालमा सुपरमार्केटमा चाहिने सिप कहाँ सिक्न पाइन्छ ? उत्तर : कुमुद खनाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ -बिडम्बना ! नेपालमा सुपरमार्केटमा चाहिने सिप सिकाउने ठाँउ छैन । तपाईं आफैले काठमाडौंमा अबस्थित सुपरमार्केटमा नियमित गएर अबलोकन गर्दा राम्रो । विदेशमा जस्तो पूर्ण सुपरमार्केट नभए पनि तपाईंलाई काम गर्ने आइडिया हुन्छ ।...
प्रश्न : केहि दिन अगाडी इजरायलमा रेडियोग्राफरको विज्ञापन आएको छ भन्ने कुरा सुनेँ । तर कुनै ठेगाना पाइन । के यो साँचो हो ? उत्तर : जनकराज रेग्मी, प्रवक्ता, वैदेशिक रोजगार विभाग - त्यो सत्य होइन् । इजरायलसँग नेपाल सरकारले नै नेपाली कामदार केयरगिभरमा पठाउने एमओयुमा हस्ताक्षर भएको छ । आधिकारिक कुरा थाहा पाउन कृपया वैदेशिक रोजगार विभागको वेभ पेजमा गएर हेर्नुहोला । अथवा फोन नम्बर : ०१ ४७८२६१६ मा सम्पर्क गर्नु होला । इजरायलको रोजगारीबारे थप जानकारी तलको लिङकमा गएर हेर्...
युएईको भिसा आउन कति दिन लाग्छ ?
प्रश्न : म युएईमा रोजगारीको लागि जान चाहान्छु । युएईको भिसा आउन कति दिन लाग्छ ? र जम्मा लागत कति लाग्छ ? उत्तर : निम नन्दन जी, युएईको भिसा आउन ठ्याक्कै यति दिन लाग्छ भन्न सकिदैन । हामीले आधिकारीक संस्था संगै कुरा गर्यौं । तर मानीसहरुको अनुभवमा चाहि केहि हप्ता देखि महिना सम्म पनी लाग्न सक्छ । यो कुरा कम्पनी अनुसार र म्यानपावरले भिसा अप्लाइ गरेको मितिले नी फरक पार्छ । लागतको कुरा गर्दा चाहि, नेपाल सरकारले जारी गरेको न्युनतम लागत खर्च लागु भइसकेपछि जम्मा १० हजार देखि १८ हजार स...
प्रश्न : म इजरायल जान चहान्छु । के के डकुमेन्ट चाहिन्छ त्यो पनि थाहा पाए तर कहाँ सम्पर्क राख्ने थाहा भएन । अनि हिब्रु भाषाको ठाँउमा‌ अंग्रेजी भए हुदैन ? जानकारी गराइ दिनु भए आभरी हुने थिए । उत्तर : नेपाल सरकार र इजरायली सरकार बिच भएको सम्झौता बमोजीम केयर गिभरमा पठाउने तयारी भइरहेको छ । दक्षिण कोरिया जसरी नेपाल सरकारले नै पठाउछ । यो महिला र पुरुष दुबैको लागि हो । तर केहि हदहरु तोकिएको छ जस्तै : केयर गिभर सम्बन्धि ३ महिने तालीम लिएको हुनु पर्यो वा प्र्याक्टीकल नर्सिङ पढ...
प्रश्न : म वैदेशिक रोजगारीबाट छुट्टीमा घर आएको छु । श्रम स्वीकृती सकिन अझै दुई महिना बाँकी छ । के अब फर्किदा मैले पुनः श्रम स्वीकृति लिनु पर्छ ? कि नगराई जान सकिन्छ ? उत्तर : आसन जी, तपाईंको श्रम स्वीकृति अझै दुई महिना बाँकी भएकाले फर्केर जान त अप्ठेरो हुँदैन । तर दुई महिनापछि तपाईंको श्रम स्वीकृति स्वतः सकिन्छ । विदेशबाटै श्रम स्वीकृति लिन झञ्झटिलो प्रक्रिया गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विदेश फर्कनअघि श्रमस्वीकृति लिएरै जानु बुद्धिमानी हुन्छ । श्रमस्वीकृति नभएको खण्डमा विदेशमा द...